मुकेश चौरसिया हत्या प्रकरणः स्थानीय नेताको ‘जुँगाको लडाइँ’ र लाशमाथिको राजनीति
नेकपा विन्दवासिनी गाउँपालिका कमिटिका सचिव मुकेश चौरसियाको हत्यामा संलग्न मुख्य आरोपीमध्येका एक ३२ वर्षीय उत्तम भनिने निरञ्जन तिवारी पक्राउ परेका छन्। बिन्दवासिनी घटनाको यो पछिल्लो अपडेट हो।
नेपाली जनताको चाहना र आन्दोलनको आवश्यकताले मुलुकका दुई ठूला पार्टीका बीचमा एकता भएको भनिए पनि त्यही एकताले पर्सामा कायर्कताको शहादत माग गर्‍याे।
पार्टी केन्द्रले स्थानीय कमिटीको एकताका लागि बनाएको मापदण्डलाई उल्लंघन गरेको हुनाले नै पर्सामा मुकेश चौरसियाले ज्यान गुमाउने वातावरण बन्यो। स्थानीय तहमा जुन पार्टीले बढी मत हासिल गरेको छ। त्यही पार्टीले पहिलो नेतृत्व पाउने र दोश्रो मत ल्याउनेले सचिव पाउने मापदण्ड तय भएको थियो। मापदण्ड अनुसार पार्टी एकतालाई तल तल सम्म मिलाउन कार्यदलको निर्माण भयो।
नेकपा एमालेको तर्फबाट रामचन्द्र साह, प्रभु हजरा र माओवादीका तर्फबाट विजय महतो र छोटेलाल यादव पर्सामा कार्यदलका सदस्य बनाइए। पार्टीले तय गरेको मापदण्ड अनुसार पार्टी एकताको काम गर्ने जिम्मेवारी पाएको यही कार्यदलले पार्टीलाई आफनो मनलाग्दी गरेकै कारण पर्साको नेकपा अहिले समस्यमा परेको र गम्भीर क्षति व्यहोर्नु पर्ने अवस्थामा पुगेको नेकपाका एक नेताले बताए।
मापदण्ड अनुसार ठोरी गाउँपालिकाको नेतृत्व माओवादीले पाउनु पर्थ्याे। तर, कार्यदलमा रहेका सदस्य रामचन्द्र साह र विजय महतोले गाउँपालिका साटासाट गरेर मापदण्ड लत्याए। यही प्रवृतिका कारण समस्याको विजारोपण भयो। विजय महतोलाई आफनो गृह गाउँपालिका वर्चश्व कायम गर्ने झोक चल्यो। रामचन्द्र साहमा जयप्रकाश थारूलाई “देखाई दिने” दम्भ थियो। पार्टीको मापदण्ड लत्याउने यही कामको विकसित रुप हो बिन्दवासिनी घटना।
कार्यदलले छिपहरमाईमा मुक्तिनारायण साहलाई अध्यक्षमा सिफारिश गरेको थियो। तर, जतिबेला संघीय सासदको चुनाव थियो, त्यतिबेला प्रल्हाद गुप्तालाई संयोजकको जिम्मेवारी थियो। बहुदरमाई नगरपालिकामा माओवादीले २ सय भोट कटाएको थिएन।
त्यही क्षेत्रका संविधानसभाका सदस्य राजकुमार गुप्तालाई ठेगान लगाउने उद्देश्यले रामचन्द्र साह र छोटेलाल यादवको डिजाइनमा त्यहाँ पनि माओवादीलाई अध्यक्ष र एमालेलाई सचिव बनाउने काम भयो।
मापदण्ड अनुसार एमालेले अध्यक्ष पाउनु पर्थ्याे र माओवादीले सचिव। कार्यदलले मनलाग्दी रुपमा गरेको सिफारिसविरुद्ध कतिपय ठाउमा उजुरी परेका थिए। त्यसका बाबजुद पार्टीले शपथग्रहणको कार्यक्रमको आयोजना गर्‍याे।
२०७६ वैशाख ६ मा वीरगञ्‍जको राणीसति अतिथि सदनमा आयोजना गरिएको शपथग्रहण कार्यक्रम विभिन्न ठाउँको विवादकै कारण राेकियाे। पार्टीका प्रदेश अध्यक्ष प्रभु साह आफै कार्यक्रममा सहभागी हुन आएका थिए। यही विवाद देखेपछि प्रदेश कमिटीले, पार्टी केन्द्रले तय गरेको मापदण्डका आधारमा कतिपय स्थानको कमिटीको फरमेशन सच्याएको छ।
२०७६ वैशाख २ गते प्रदेश कमिटीले गरेको निर्णयअनुसार ठोरीमा माओवादी केन्द्र , जिराभवानीमा एमालेले नेतृत्व गर्ने र छिपहरमाईमा प्रल्हाद गुप्तालाई अध्यक्षको जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको छ। यो कुरा वैशाख २७ मा प्रदेश कमिटीले जारी गरेको परिपत्रमा उल्लेख छ। लेनिनवादी संगठनात्मक सिद्धान्तको दुहाई दिने कम्युनिष्ट पार्टीमा तल्लो कमिटी माथिल्लो कमिटीको मातहत रहने पद्धति छ।
तर, पर्सामा रामचन्द्र साह, विजय महतो र छोटेलाल यादवले माथिल्लो कमिटीको निर्णयको प्रतिकूल ठोरी, जिराभवानी, छिपहरमाईमा समानान्तर रुपमा शपथग्रहण कार्यक्रम गरेका छन्।
पार्टीका पर्सा इन्चार्ज रामचन्द्र साह अभिभावक हुनुपर्नेमा झगडिया बनेर फुटपरस्त कार्यक्रम गर्दै हिँडेको हुनाले पार्टीले बिन्दवासिनीका सचिव मुकेश चौरसियालाई गुमाउनु परेको टिप्पणी जिल्लाका एक नेताले गरे। मुल नेतृत्वको सहमति बिना पार्टीका कुनै पनि कामले वैधता नपाउने कम्युनिष्ट पार्टीले विकास गरेको सांगठानिक पद्धति हो।
साहको नेतृत्वमा यही पद्धतिको हुर्मत लिने काम भयो, जसले कम्युनिष्ट पार्टी भित्र हार्दिकता आत्मीयता समाप्त भयो, अराजकता र दोहोरो भिडन्तको अवस्था सिर्जना भएको जिल्ला कमिटीका सदस्य अनुप तिवारीको बुझाई छ।
गुप्तालाई किन टार्गेट गरिदैछ ?
राजकुमार गुप्ता २०७० सालको संविधानसभाको निर्वाचनमा १६ हजारभन्दा बढी मत ल्याएर विजयी भएका साविक एमालेका युवा नेता हुन्। उनले नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट मन्त्री भइसकेका अजय चौरसियालाई पछि पार्दै जीत निकालेका थिए।
त्यही क्षेत्रमा साविक एमालेका तर्फबाट नागेन्द्र चौधरी र रामचन्द्र साहले दुई दुई पटक हार व्यहोरेका थिए। पछिल्लो आम निर्वाचनमा गुप्ता क्षेत्र नं ३ बाट प्रत्यासी थिए। चौधरी क्षेत्र नं ३ को 'क' र साह क्षेत्र नं २ को 'क'बाट प्रदेश सभाका उम्मेदवार थिए।
तीनै जनाले हारको सामना गर्नुपर्‍याे। चौधरी र साह मतदाताको बीचमा जाने संगठन बनाउने र जनताको काम गर्न पहलकदमी लिने कुरामा चासो लिदैनन्। तर, गुप्तामा जनताको काम जुनसुकै हालतमा गर्ने र कार्यकर्ता संरक्षणकोलागि क्रियाशील हुने विशेषता छ।
२०४६ को परिर्वतनपछि अविछिन्न रुपमा पार्टीको पर्सादेखि केन्द्रको नेतृत्वसम्म बहाल रहेका नेताहरू जनताको बीचमा अनुमोदन हुन नसक्ने भएकाले नै गुप्तालाई टार्गेटमा पार्न खोजिएको जिल्ला सदस्य तिवारी बताउँछन्।
मात्रिका यादवले नेतृत्व गरेको पार्टीमा पोलिटब्यूरो सदस्य रहेका छोटेलाल यादव एकतामा सामेल हुँदा घटुवामा परेर प्रदेश कमिटीको सदस्य भएका छन्। कहिले फोरम कहिले कम्युनिष्ट हुने यादव पछिल्लो पटक निर्वाचन क्षेत्र नं ३ को प्रदेशसभा २ मा उम्मेदवार थिए। त्यतिबेला उनले प्रदेश सभाको टिकट नै २५ लाखमा बेचेको आरोप लागेको थियो।
मात्रिका यादवले हप्काएपछि उनी आफै उम्मेदवार भएर चुनाव लडेको कुरा आज पनि नेकपा पर्साभित्र चर्चाको विषय बन्ने गरेको छ। तिनै यादव गुप्तालाई फसाएर क्षेत्र नं. ३ मा दावी गर्ने अभियानमा लागेको चर्चा चल्न थालेको छ। बिन्दवासिनी गाउँपालिकामा दोहोरो झडपमा परी मुकेश चौरसिया घाइते भएको सूचना यादवले नै पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी आसमान तामाङलाई १२ बजेर २ मिनेटमा दिएका थिए।
घटनाको जानकारी दिएका यादवसहितका नेताहरू बाहिर कार्यकर्ताले मारमुङग्री गर्दा समेत बाहिर निस्केर कार्यकर्तालाई सम्झाउने प्रयास गरेनन्। झगडा रोक्न खोजेनन्। यसले कार्यक्रमको आयोजना गर्नेहरूको उद्देश्य के थियो भन्ने प्रश्न उठेको छ र त्यतातर्फ प्रहरीको अनुसन्धान केन्द्रित हुुनु पर्ने तिवारीको भनाई छ।
बिन्दवासिनी घटनाको तत्कालिन रुप
घटना कात्तिक ६ गतेको हो। यो दिन बिन्दवासिनी गाउँपालिकाको प्रसौनी भाठामा नेकपाको गाउँ कमिटीको शपथग्रहण कार्यक्रम चलिरहेको थियो। यो कार्यक्रममा पर्साका पार्टी अध्यक्ष र त्यही क्षेत्रका संविधान सभाका सदस्य राजकुमार गुप्तालाई निम्ता गरिएको थिएन। त्यति मात्र होइन, जहाँ कार्यक्रममा आफूहरूलाई नबोलाइएको भन्दै एउटा पक्षले अर्को पक्षसंग प्रश्न गर्दै थियो।
केहीबेरपछि यो सिलसिला प्रश्न गर्नसम्म मात्रै केन्द्रित रहेन कि पछि भाटा समेत हानाहान भयो। जसले गर्दा मुकेश चौरसियाको ज्यान गयो। केही घाइते पनि भए।
तर, यो घटना पहिला कुन पक्षबाट सुरु भएको र घटनाको मुख्य दोषी को हाे भन्ने छिनोफानो नहुँदै राजनीतिक दबाबमा जिल्लाको सरकारी वकिलको कार्यालयबाट केही व्यक्तिमाथि मुद्दा दर्ता भयो।
जसमा भीडमा छुट्याउन गएको निर्दोषदेखि कार्यक्रमस्थलमा सहभागी नभएका व्यक्तिहरूको नाम समावेश छ। यद्यपि, घटनाको सबै विवरण त्यहाँका स्थानीयले खिचेको भिडियाेले देखाइरहेको छ। र, यो नै धेरै प्रमाण पनि हो।
घटनाको शुरुमा एउटा घरभित्र कार्यक्रम चलिरहेको देखिन्छ। कार्यक्रम चलिरहेकै बेला एउटा पक्षले कार्यक्रमबारे सोधखोज गर्न कार्यक्रम स्थल आइपुग्छन्। सोधपुछ चलिरहेकै बेला दुवै पक्षबाट भनाभन शुरु भएर हात हालाहल हुन थाल्यो। र, भिडियाेमा देखिए अनुसार हात हालाहल हुँदै गर्दा आयोजक पक्षबाटै भाठा निकाली अर्को समूहमाथि बर्साइएको देखिन्छ।
त्यो एकजनाबाट नभएर आयोजक पक्षका धेरैजनाबाट। तर, जाहेरीमा भीडमा छुटाउन गएको निर्दोषदेखि कार्यक्रमस्थलमा सहभागी नभएका व्यक्तिहरूको नाम समावेश छ। यद्यपि, घटनाको सबै विवरण त्यहाँका स्थानीयले खिचेको भिडियाेले देखाइरहेको छ। र, यो नै धेरै प्रमाण पनि हो।
बिन्दवासिनी घटना र जाहेरी
बिन्दवासिनी घटना पनि पार्टीभित्रको एउटा पक्षले राजकुमार गुप्तालाई हत्यारा, योजनाकार भन्दै किटानी जाहेरी दिन लगाएर कारबाहीका लागि आन्दोलन नै गर्‍याे। पार्टीलाई केन्द्रीय रुपमा नेतृत्व गर्ने नेताहरुले नै यही कुरा सार्वजनिक रुपमा टिप्पणी गरे।
पर्साको प्रहरी उपरीक्षकले प्रधानमन्त्रीको दबाबमा जाहेरी नलिएको अभिव्यक्ति दिए। सञ्चारमाध्यमले पनि प्रधानमन्त्रीको दबाबमा जाहेरी नलिएको समाचार प्रकाशन प्रशारण गरे। प्रधानमन्त्रीले प्रहरी उपरीक्षकलाई जाहेरी दर्ता नगर्न दबाब दिएको भए त्यही दबाब जिल्ला सरकारी न्यायाधीवक्तालाई पनि त हुन्थ्यो होला? भन्ने प्रश्न अहिले पेचिलो बनेको छ।
प्रहरीले प्रारम्भमा घटनामा भौतिक उपस्थिति भएर झडपमा सामेल भएकालाई अनुसन्धानका लागि कानूनको दायरामा लिन्छ। त्यसपछि मतियार, योजनाकार वा अन्य कुराहरू खुल्दै जाँदा अन्यहरुलाई पनि कानूनी दायरामा लिन्छ। तर, बिन्दवासिनी घटनामा सडकबाटै राजकुमार गुप्तालाई हत्यारा र योजनाकार करार गर्दै कारबाहीको माग गरिनु नै आग्रहपूर्ण रहेको एक कानून व्यवसायीको भनाई छ।
अब के गर्छ त प्रहरी ?
मृतक चौरसियाको हत्याको दोषी बनाएर १२ जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता भइसकेपछि प्रहरीले मसिनो अनुसन्धान गर्न थालेको छ। घटनामा दोषी को हो भन्ने कुरा सार्वजनिक भएका भिडियोहरूले बोलेको पर्साका प्रहरी उपरिक्षक गंगा पन्त बताउँछिन्। दोषीहरूको पहिचान भएकाले अनुसन्धानमा प्रहरीले धेरै तर्क बहस गर्नु नपर्ने उनको भनाई छ।
‘घटनामा संलग्न नदेखिएका व्यक्तिको नाममा समेत किटानी जाहेरी दिने प्रवृत्ति यो घटनामा पनि देखियो,’ उनले भनिन्, ‘पुनर्विचार गरेर किटानी जाहेरी ल्याउन भनेकी थिएँ, उहाँहरूले ल्याउनु भएन।’
किटानी जाहेरीमा राजकुमार गुप्ताको नाम थियो। राजकुमार गुप्ता घटनास्थलभन्दा ८ किमि टाढा थिए। भौतिक रुपमा उनको सहभागिता नदेखिएको अवस्थामा प्रहरीले उनको नाम किटानी जाहेरीमा लिन चाहेको थिएन। घटनामा जसलाई दोषीका रुपमा देखाउने प्रयास भयो प्रहरीले तथ्य फरक फेला पारेको छ।
प्रहरीले वास्तविक व्यक्तिका विरुद्ध जाहेरी दिन आग्रह गरे पनि पीडित पक्षले सरकारी वकील कार्यालयमार्फत् मुद्दा दर्ता गराएका छन्। मुद्दामा नाम आए पनि घटनामा संलग्नता नदेखिए प्रहरीले निर्दोषलाई फसाउने काम नगर्ने एसपी पन्तको भनाइ छ।
पूर्व डिआइजी हेमन्त मल्लले घटनाको भिडियाेको विश्लेषण गर्दा यो घटना आवेसप्रेरित रहेको देखिने बताएका छन्। घटनामा राजनीतिकरण भएको मल्लको भनाई छ।
#पर्सा #केपी_शर्मा_ओली #नेपाल_कम्युनिष्ट_पार्टी_नेकपा #मुकेश_चौरसिया
प्रकाशित मिति: सोमबार, कात्तिक १७, २०७७ १८:४२